Martech Zone: Kugamuchirwa KuMy New Martech Kuburitswa! | Martech Zone
Kwave kungori gore kubva pandakapedzisira kugadzirisazve WordPress yedu saiti. Kunyange ini ndaifarira marongero, ini ndaive netani yemapulagi uye ekugadzirisa kuti iite nenzira yandaida nayo, futi. NeWordPress, izvo zvinogona kutanga kuperetera njodzi kubva pakuona kwekuita uye ini ndanga ndichiona kupaza kuri musimboti.
Nekudaro, ndakaenda kunovhima dhizaini inogona kusanganisa ese makuru maonesheni pamwe nekuteerera kumafoni maseru - zvese izvi ndichikurudzira vaverengi vedu kunamatira kuti vawane ruzivo rwavaitsvaga.
Ndakagadzira tsika WordPress theme yemwana pamusoro pesimba uye inotsigirwa-dingindira rakatengwa kubva Themeforest, ndokuwedzera kumwe kushanda kukuru kwataida kusundira zvirimo kune yedu mbozha application pamwe nekubatanidza chikafu chedu kune mamwe masevhisi atinoda kugovana zvirimo.
Sezvaungave iwe wakacherekedza, ini ndakadzokororwa kubva kuThe Marketing Technology Blog kuenda Martech Zone, uchishandisa iyo indasitiri-yakatarwa izwi rekutengesa uye kushambadzira tekinoroji… MarTech. Izwi rekuti blog raive raenda munzira pandakaramba ndichitsikisa kutsvagisa uye zvinyorwa zvakanangana nekubatsira nyanzvi nekutsvaga, kutsvaga, nekudzidza nezvekutengesa uye kushambadzira tekinoroji.
Ini zvakare ndine yakapusa domaini yandakatenga marketing.technology izvo kumberi kuno (isu tinogona kufambisa zvese kuenda kune iyo domain kamwechete .technology domains zvakatonyanya kufarirwa).
Izvo Zvimwe Zvinoita Martech Zone Unazvo?
Resources - Ini ikozvino ndine yakazara Martech Resource chikamu, icho chinosanganisira zviitiko, mapepa evachena, uye zvimwe zviwanikwa.
Podcast - Ini ndinoramba ndichibvunzurudza vatungamiriri ve software, varapi, vanyori, uye vatauri kubva kutengesi nekutengesa indasitiri Martech Zone Interviews.
Ndeipi chinangwa chekupedzisira cheMartech?
Ndingangodaro ndisiri makore gumi, asi ndinogara ndichitsvaga kudyidzana nemakambani enhengo, vanopa rubatsiro, nharaunda, zviwanikwa zvedzidzo, uye zvitupa… kana iwe uine chimwe chinhu chinowedzera kukosha kwechinyorwa changu, ndiudze!
Tags: Blogjenn lisakMarketing technology blogmartechmartech blogmartech nharaundamartech nzvimbo yekudzidzanguvadingindirawordpress theme